XASAASI-Akhriso shan qodob oo aad u baahan tahay inaad ogaato si Xidig u noqdo gudoomiyaha barlamaanka. – Puntland News
Home 2017 January 11 Somali News XASAASI-Akhriso shan qodob oo aad u baahan tahay inaad ogaato si Xidig u noqdo gudoomiyaha barlamaanka.
XASAASI-Akhriso shan qodob oo aad u baahan tahay inaad ogaato si Xidig u noqdo gudoomiyaha barlamaanka.
January 11, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Doorashada gudoonka barlamaanka Soomaaliya ayaa ka socota magaalada Muqdisho iyadoona siweyn loo hadal hayo xildhibaan Xidig oo musharaxnimadiisa ay diidan tahay beeshiisa Daarood, waxaana jira qodobo u sahlaya.
1 – Hawiye: Beesha Hawiye ayaa la fahansan yahay iney go’aamin karto in Xidig uu Noqdo gudoomiyaha barlamaanka
Sababta ayaa ah in XIldhibaanada Beelaha Hawiye ay ku cadaadin doonaan musharaxa beesha Daarood inuu noqdo gudoomiyaha barlamaanka si tartanka doorashada Madaxweynaha ay isugu so haraan Beelaha Daarood iyo Raxanweyn.
2- Digil & Mirifle: Shariif Xasan Sh Aadan ayaa la fahansan yahay inuu ka danbeyay in Xidig uu isku soo sharaxo gudoomiyaha barlamaanka si uu fursad ugu helo inuu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha.
Arintan ayaa ka dhigeysa in Xildhibaanada laga soo doortay Koofur Galbeed ay boqolkiiba 70 taageersan yihiin siyaasada Shariif Xasan ayna ucodeyn doonaan in Xidig loo doorto gudoomiyaha barlamaanka.
3- Kuraasta Waqooyiga Soomaaliya: Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sh iyo RW CC ayaa la fahansan yahay iney taageerada ugu badan ka haystaan xubnaha gobollada Waqooyi S/Land kasoo jeeda.
Si kastaba, Xubnahan ayaa ku biiri doona isbaheysiga beesha Daarood looga saarayo iney utartanto xilka madaxweynaha Soomaaliya iyagoo udooran doona Xidig afhayeenka golaha Shacabka.
4 – Taageerada Itoobiya: Itoobiya ayaa la rumeysan yahay iney taageero xoogan siineyso musharaxan kasoo jeeda Jubbooyinka.
Musharax Xidig ayaa helaya taageerada Dowlada Itoobiya taas oo galaangal siyaasadeed oo muuqda ku leh doorashada haatan soo socota Soomaaliya, si kastaba, Xidig ayaa la fahansan yahay inuu haysto taageerada dowladaas.
5- Lacag ayaa Kala Shaqeysa: Xildhibaan Xidig ayaa la rumeysan yahay in siyaasiyiin badan oo kasoo jeeda Beelaha Hawiye iyo Raxanweyn uu ka helay lacag aan caadi aheyn si uu xilkaas ugu soo baxo.